प्रस्तावित न्यायाधीशले भने सर्वोच्चले गरेको फैसला गलत-NepalKanoon.com
प्रस्तावित न्यायाधीशले भने सर्वोच्चले गरेको फैसला गलत
जेठ १०, काठमाडौं । सर्वोच्चका स्थायी न्यायाधीशका लागि प्रस्तावित गोविन्दकुमार उपाध्यायले २६ सभासद मनोनयनबारे सर्वोच्चले गरेको फैसला गलत भएको भएको बताए ।
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा सुनुवाइका क्रमा उनले यो संसद भनेको ठट्टा होइन भन्दै दलहरुको बारेमा निर्णय गर्दा अदालत निकै सचेत हुनु पर्ने बताए । ‘तर, म अदालतको भाषा हेर्छु अहिले पनि दलीय भागवण्डाको आधरमा के भनेको ? दलहरुलाई यसरी किन अविश्वास गर्ने हामी ? दलबाहेक कसले पार लगाउन सक्छ ? दलहरुलाई हामीले जनताको नजरमा खसाल्ने कि बलियो बनाउने ?’ सर्वोच्च अदालतलाई प्रश्न गर्दै उपाध्यायले भने-’के अदालत आफ्नो समाजिक जिम्मेवारीबाट अलग रहन सक्छ ?’
समकक्षी निकायमा परमादेश जारी गर्न नमिल्दै भन्दै उनले भने-तर, हाम्रो अदालतले प्रतिशेध जारी गरेको छ । यो पिन्सिपल्ली गलत हो ।’ यद्यपि उनले यो आफ्ना बौद्धिक आलोचना मात्र भएको बताए ।
उपाध्यायले सार्वजनिक महत्वका रिटहरुको खासै महत्व नहुने धारणा राखे । कार्यपालिका कमजोर हुँदै भयावह स्थिति आएको भन्दै उनले भने-’न्यायपालिका बलियो भएर के पायौं ? तर, कार्यपालिका बलियो हुनुपर्छ भनेको तानाशाह भने होइन ।